QUALITY - I-Chapman Technology Co., Ltd.
Ukwaneliseka Kwekhasimende umgomo wethu oyinhloko!
Kusukela kumqondo kuya ekukhiqizweni, sizinikele ekwanelisekeni okuphelele kwamakhasimende ethu entweni ngayinye ehanjisiwe nesevisi ngayinye enikeziwe. I-ISO yethu: Izitifiketi ze-9001 zimelela ngaphezu kokubhaliswa ngama-ejensi wokugunyaza; kuyisiko eliqhutshwa inqubo yekhwalithi ehlelekile nokuthuthuka okuqhubekayo. Sizibophezele ekuhlinzekeni izinsizakusebenza ezibalulekile ngenkathi siziphonsela inselelo ngokuqhubekayo ekuthuthukiseni amamethrikhi wethu wekhwalithi ukudlula okulindelwe amakhasimende ethu kuyo yonke imikhiqizo emisha kanye / noma nezinhlelo zefa.
Inqubomgomo yethu yekhwalithi “Ukwethembeka nokugcina umthetho; Ukuhola Kwezobuchwepheshe; Ikhwalithi ephezulu nokusebenza kahle; Ikhasimende Libeka Kuqala ”. Ukwethembeka kungumphefumulo wenkampani yethu. Sihlose ukuhlinzeka ngomkhiqizo nekhwalithi ephezulu ngokusebenza kahle okukhulu kumakhasimende ethu. Ukwaneliseka kwamakhasimende umgomo wethu omkhulu. Okwamanje, ukuzibophezela kwethu ekulaleleni umthetho kunikeza ukuvikelwa okukhulu enkampanini yethu.
Ukuphathwa Kwekhwalithi yethu kunezici ezine eziyinhloko: Uhlelo Lwekhwalithi, Ukuhlelwa Kwekhwalithi, Ukulawulwa Kwekhwalithi kanye nokwenza ngcono ikhwalithi. Sinemishini yokulinganisa esezingeni eliphakeme futhi enembile kanye nesoftware Enamandla yokuphatha ikhwalithi ukuqinisekisa ukulawulwa kwekhwalithi okusebenzayo.
Ukuhlaziywa kwenani kusuka ekwakhiweni komkhiqizo nesigaba sokuthuthuka
Izinhloso zekhwalithi Uhlelo lwekhwalithi yephrojekthi
Imodi Yokwehluleka Kwedizayini Nokuhlaziywa Kwemiphumela
Inqubo Yokwenza Imodi Yokwehluleka Nokuhlaziywa Kwemiphumela
Inqubo Yokuvunyelwa Kwengxenye Yokukhiqiza
Ukulawulwa kwekhwalithi yomhlinzeki
Inqubo yokulawula ikhwalithi
Ukulawulwa kwekhwalithi ephumayo
Ukuhlaziywa Kwamanani / Ukukhiqizwa Kwezobunjiniyela Bokubaluleka
Imishini yokulinganisa esezingeni eliphakeme